XOG: M/weyne Shariif Xasan oo Hogaaminaya Qorshe Farmaajo xiriirka ugu jarayo Qatar | afrikada news online
XOG: M/weyne Shariif Xasan oo Hogaaminaya Qorshe Farmaajo xiriirka ugu jarayo Qatar
Xog la helay ayaa sheegaysa in Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu kulamo saacado badan qaatay la yeeshay Masuuliyiin ka tirsan dowlada isu tagga Imaaraadka Carabta.
Kulan oo ahaa mid qarsoodi ah ayaa la sheegay in looga hadlay sidii Madaxweyne Shariif Xasan uu u taageeri lahaa go’aanka dowladaha xulufada ah oo Imaaraadka ay ku jirto xiriirka ugu jareen dalka Qatar.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa loo balanqaaday Lacago aad u badan iyo Mashaariic waa weyn oo ka madax banaan dowlada dhexe kuwaas oo laga fulin doono deegaanada uu ka taliyo, balse waxaa laga doonayaa inuu abaabulo kacdoon ka dhan Mowqifka dhex dhexaadnimada oo Dowlada Soomaaliya ay ka istaagtay Khilaafka dalalka Khaliijka.
Dowlada Imaaraadka ayaa wada abaabul ay ku dooneyso in cadaadiska ay ku saarto Madaxeyne Farmaajo, si uu xiriirka ugu jaro dalka Qatar oo ay u arkaan hadii Somalia go’aankaas qaadato inay soo wajaheyso Go’doon xoogan.
Shalay sida aan xogaheena idin kugu soo gudbinay Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle ayaa kulan Muqdisho kula qaatay Safiirka Imaaraadka carabta u fadhiya Magaaada Muqdisho, waxaana loo sameeyay balanqaadyo dhowr ah, kuwaas oo intooda badan uu aqbalay.